रंगमंच – ZoomNP
काठमाडौं । बलिउडका चर्चित हाँस्य कलाकार राजपाल यादव ‘करोडपति’ नामक नेपाली फिल्म खेल्न काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
राजपाल काठमाडौं आइपुगेलगत्तै बुधबारदेखि नै बनेपाबाट फिल्मको छायाँकन सुरु भएको छ । जहाँ राजपाल र नायक आर्यन अधिकारीले टेक दिए । फिल्म छायाँकनका लागि राजपाल दुई साता नेपालमा बस्ने फिल्म निर्माण युनिटले जानकारी दिएको छ । फिल्ममा राजपालको रोल नेपालीको रुपमा हुने बताइएको छ ।
अधिकारी व्रदर्स पिक्चर्स र केतन फिल्मस्को संयुक्त...
१८ फागुन, एजेन्सी । पप गायिका माइली साइरस र अभिनेता लायम हेम्सवर्थको आफ्नो विवाह नेपालमा हुने भएको छ । २४ वर्षीय माइलीले २७ वर्षीय लियमसंग आउँदो समरमा नेपालमा विहे गरेर अष्ट्रेलिया जाने योजना रहेको बताएकी हुन ।
उनीहरुले महंगो हलिउड विवाह छोडेर शान्त नेपाल रोजेका हुन् ।
आफ्नो बोल्ड छवी बनाएकी माइलीले विवाहको लागी धेरै रकम खर्च गर्न नचाहेको बुझिन्छ ।...
सलमान खानको फिल्म ‘वान्टेड’मा अभिनय गरेकी नायिका आयशा टाकिया बलिउडबाट गायव छिन्। विवाह गरि छोराको आमा बनेपछि फेरि एकटपक आयशा फिल्मी दुनियाँमा फिर्ता हुने तरखरमा छिन्। ७ वर्षपछि उनी एक म्युजिक भिडियोमा देखिने भएकी हुन।
‘सोचा न था’ बाट आफ्नो करिअर सुरु गरेकी आयशाको बारेमा भनिन्छ कि उनले सिलिकन इम्प्लान्ट गरि ब्रेस्टको साइज बढाएकी हुन। जब...
पोर्न उद्योगमा जान चाहेको बताउने उनी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको नाङ्गा तस्वीरका कारण प्रहरी नियन्त्रणमा समेत परिन् । उनलाई फोटो खिच्न सहयोग पुर्याउने उनकी आमा र भाइ अहिले काठमाडौमा बस्दै आएका छन् । स्कूलमा अध्ययन गर्दै गर्दा न्यूड फोटो सेसन गरेकी पनेरुलाई विद्यालयले निष्कासन गरेको थियो । उनले कक्षा नौंमा अध्ययन गरेकी छिन्...
‘डान्स इन्डिया डान्स’ र ‘झलक दिख्लाजा’ को उपाधि जितिसकेकी तेरियाको बलिउड इन्ट्री: को संग गर्नेछिन् डेब्यु- ऋतिक कि सोनाक्षी?
काठमाडौं । “मलाई थाहा छैन कि, म शो जितेपछि के गर्छु । तर, म बलिउडमा प्रवेश गर्न चाहान्छु । म बलिउडलाई टिभीमा हेर्दै ठूली भएकी हुँ । यदि मलाई मौका मिल्यो भने अवश्य नै म यो क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छु ।”
‘झलक दिखला जा’ को उपाधि जितेकी तेरियाले स्टेजमै भनेकी थिइन् । र, उनको उपाधि जित्ने सपना पनि पूरा भयो । अब के तेरियाले बलिउडमा इन्ट्री पाउँछिन् ।...
चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीका पुर्व श्रीमान रोचक दोश्रो बिबाहको तयारीमा, यी हुन् प्रियंकाको स्थान पाउने दोश्री श्रीमती
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी अहिलेकी चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीका पूर्व श्रीमान रोचक मैनाली अर्को विवाह गर्ने तयारीमा छन् । नायिका कार्कीसंग औपचारिक रुपमा डिभोर्स भइसकेपछि मैनाली अर्को विवाह गर्न लागेका हुन् । उनीहरुबीच दुई वर्षअघि डिभोर्स भएको थिए ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्दै आएका मैनालीले अंशुमा खरेललाई आफ्नो जीवन साथी बनाउने तयारी गरेका छन् । उनीहरुको यो हप्ताभित्र कोर्ट म्यारिज हुने जनाइएको छ । विवाहपछि अमेरिकामै भव्य पार्टी...
डीआइडी ३ कि बिजेता एवं भारतकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि रहेको झलक दिख्लाजा ९ कि बिजेता बनेकी तेरिया किन चाहेरै पनि आउँन सक्दिनन नेपाल?
नेपालको रुपन्देही बस्ने नेपाली चेली तेरीया मगर भारतीय टेलीभिजन अन्तरगत चर्चित कार्यक्रम झलक दिख्ला जा सिजन ९ को उपाधी जित्न सफल बनेकी छिन । यस अघि पनि तेरीयाले सन् २०१४ मा भएको भारतकै चर्चित सो ‘डान्स इन्डिया डान्स’ डीआईडी सिजन ३ को उपाधी जितिसकेकी छिन् । लामो समय गरेको संघर्षको परिणाम स्वरूप तेरीयाले आफ्नो जिवनमा पाएको यो दाश्रो ठेलो सफलता हो ।तेरियाले उपाधि उचालेको शो भने शनिबार साँझ कलर्स...
छक्कापञ्जा पाइरेसी गर्ने युवाको आत्महत्याका कारण दिपक-दिपा पुगे गौशाला प्रहरीमा, के भन्छन दिपक-दिपा?(हेर्नुहोस यो ताजा भिडियो)
काठमाडौं । चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ को निर्माण पक्षले आफूमाथी छानविन गर्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएको छ । चलचित्र ‘लिक’ भएपछि त्यसमा संलग्न व्यक्तिले आत्महत्या गरेको विषयलाई आफूहरु माथि जोडिएको भन्दै ‘छक्का पञ्जा’ को निर्माण पक्षले घटनाको निष्पक्ष छानवीन गर्न माग गर्दै शनिबार गौशाला प्रहरी प्रभागमा उजुरी दर्ता गरेको हो । “हामीले आज निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै निवदेन दर्ता गरायौं,” निर्माता निर्मल शर्माले भने,“ विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र समाचारमा घटनालाई नबुझी आरोप लगाइएकाले यसमाथि...
छक्कापञ्जा पाइरेसी गर्ने युवाको आत्महत्याले दिपकराज गिरीमाथि संगिन आरोप, के दोषी होलान त गिरि? प्रहरीको अनुसन्धान जारी
काठमाडौं, ३ माघ - चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ले केही समयदेखि नेपाली चलचित्र बजारमा कुनै न कुनै माध्यमबाट चर्चा कमाइरहेको छ । चलचित्रको राम्रो समीक्षा आएपछि दर्शकहरू हलमा ओइरिए अनि यो सुपरहिट भयो । अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै कमाइ गर्ने नेपाली चलचित्रमा दरियो यसको नाम ।
महिला निर्देशक दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेको चलचित्रले मल्टिप्लेक्सहरूमा सय दिन मनाएर नयाँ रेकर्ड पनि कायम ग–यो ।
तर सय दिन मनाएको उल्लासकै बीच चलचित्र पाइरेसी भएर युट्युव मार्फत सार्वजनिक भयो । अनि विदेशमा रहेका निर्माता...
‘छक्का पञ्जा’ पाइरेसीको आरोप लागेका युवाद्वारा सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या, सुसाइड नोटमा किन लेखे यस्तो उनले?
काठमाडौं, २९ पुस — चलचित्र छक्का पञ्जाको पाइरेसी आरोप लागेका एक युवकले आत्महत्या गरेका छन् । काठठमाडौंमा बस्ने नवलपरासिका २५ वर्षीय कृष्ण सुवेदीले विहीवार साँझ आत्महत्या गरेका हुन् । प्रहरीको मुचुल्का पछि उनको शवलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । सुवेदीले सुसाइड नोट पनि लेखेका छन् । उनले सुसाइड नोटमा आफ्नो मृत्युमा कसैलाई पनि दोष नलगाउन अनुरोध गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
चलचित्र पाइरेसी बारे अनुसन्धानका क्रममा महानगरीय प्रहरीको अपराध महाशाखाले उनी सहित चार...